jeudi, 05 octobre 2017 21:34
Ambohimiandra: Des renforts de lit
Depuis hier mercredi, chaque service de l’hôpital HJRA a fourni 2 lits pour l’hôpital d'Ambohimiandra.
Une quarantaine de lit supplémentaire en 48h.
jeudi, 05 octobre 2017 21:10
Sambava: Taxi-Brousse nisy nanafika tamin'ny telo maraina
Fiara mini-bus mampitohy an'i Sambava-Andapa no nitafihin'ny andiana tanora miisa fito mitam-basy androany alakamisy 5 oktobra tamin'ny telo ora maraina. Naratra tamin'izany ny mpamily ka nentina tsaboina ao amin'ny hopitalibe Besopaka - Sambava.
Raha iny handeha handray ny mpandeha tao amin'ny Fokontany Antaimby Sambava ilay taxi-brousse no izao niharan'ny fandrobana izao. Very ny entan'ny mpandeha.
jeudi, 05 octobre 2017 21:05
Oniversite Mahajanga: Nampiato ny fampianarana ireo mpampianatra
Noho ny fitokonan’ny mpianatra androany maraina no nitarika ny fampiantoana ny fampianarana nataon’ireo mpampianatry ny Oniversite Mahajanga.
jeudi, 05 octobre 2017 21:04
Mahajanga: Miato ny fitrandrahana langouste
Mandritra ny telo volana eo ny fiatoan’ny fitrandrahana oratsimba na langouste. Nanomboka tamin'ny 1 oktobra izany ka hatramin'ny 31 desambra 2017.
jeudi, 05 octobre 2017 15:41
Ady amin'ny pesta: Nandraraka fanafody teny amin'ny 2è ny Mapar
Nidina teny amin'ny boribory tany faharoa Antananarivo Renivohitra mihitsy ny Solombavambahoaka Lanto Rakotomanga ny alarobia 04 oktobra, niaraka tamin'ny fanafody iadiana amin'ny firongatry ny pesta.
Nitety isan-trano mihitsy izy tamin'izany tamin'ireo faritra tena nahiana misy izany.
Nilaza moa ity Solombavambahoaka ity fa tsy hifampiandrasana izay tsy hanao ity fahasalamam-bahoaka ity, satria ny Filoha Andry Rajoelina hoy hatrany izy dia miasa mangina ao anatin'ny fandraisana andraikitra mivantana ho an'ny mpiray tanindrazana toy ny efa fanaony hatrany.
jeudi, 05 octobre 2017 14:29
Matsiatra Ambony: Misokatra ny lalampihariana ovy
Manodidina ny 18 ka hatramin'ny 25 taonina isaky ny hektara ny vokatra azo nandritra ny heritaona. Tanjona arak'izany ny azahoana 60 taonina amin'ireo 3 hektara iasan'ny tetikasa.
Napetraka ihany koa io fiaraha-miasa io mba hiadiana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. 220kg isan'olona isa-taona no fihinanam-bary eto Matsiatra Ambony raha 115kg/ olona/ taona izany ho an'ny faritra hafa maneranany Nosy. Ka ho fiatrehana ny fiovan'ny toetrandro sy ny fahasarotan'ny fambolena aterak'izany dia najoro io tetikasa io.
Mandray roa ny tarigetra arak'izany, ny fiadiana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny fitohizan'ny asa eo amin'ny famolahana ny tsenan'ny ovy ilain'ireo trano fisakafoana lehibe no kendrena ao anatin'ny lavitr'ezaka.
jeudi, 05 octobre 2017 13:47
Toamasina: Nikoarin'ny havany ilay faty matin'ny pesta
Voamarin'ny mpitsabo teto amin'ny hopitalin'ny Toamasina fa matin'ny pesta ity marary iray ny alarobia 27 septambra, ka nanapakevitra ny tompon'andraikitra fa tsy azo omena ny fianakaviana ny razana fa alevina mitokana anaty béton.
Naterina tany Manangareza ny razana izay nisy Zandary maromaro mihitsy niaraka tamin'ny Directeur Régional de la Santé Antsinanana, ny Médecin Chef de Toamasina, nanatontosa ny fandevenana mba tsy hiparitahan'ny aretina.
Ny alin'io ihany anefa dia nanaovan’ny fianakaviany latsak’alina ny razana ka nokoarin’izy ireo, ary nentiny nangingina tany Vangaindrano, satria avy any ny fiavian’ilay namoy ny ainy.
Manahy ny rehetra ny hifindran'ny aretina, satria ny Médecin Chef izay niatrika ny fandevenana, nefa nandray ny fepetra rehetra aza narary, ka tsy fantatra izay toerana nandalovan'ny razana sy ireo nikirakira izany razana matin'ny Pesta izany.
jeudi, 05 octobre 2017 12:41
Peste: Interdiction d'activités sportives
Le ministère de la jeunesse et des sports, par une note circulaire, adressée à toutes les directions, toutes les fédérations sportives que suite à la déclaration d'existence de la maladie contagieuse de la peste, interdit toute organisation sportive sur tout le territoire Malagasy.
jeudi, 05 octobre 2017 11:26
Ambondrona Mahajanga: Miakatra ny maripana
Tamin'ny fito ora maraina, nirohotra nihazo ny vavahady miditra ny campus ireo mpianatra nanakan-dalana tamin'ny andrin-jiro sy vato ary hazo miaraka amin'ny antsoantso sy horakoraka.
Tsy nisy vokany ny fihaonan'ny filohan'ny fikambanana BDUM ( bureau des étudiant de l'université de Mahajanga) sy ny filohan'ny oniversiten'i Mahajanga niaraka tamin'ny solontenan'ny préfet ny tolakandron'ny talata teo teny amin' ny batiment Kakal Majunga Be.
Tsy nahafapo ireo mpianatra ny fifampiresahana mivantana niarahana tamin'ny filohan'ny oniversite ny profesora Andrianarivony Andrianony Emmanuel sy ny solontenan'ny prefen'i Mahajanga.
Resaka vatsim-pianarana sy tranon'ny mpianatra moa no tena angatahin'ireto mpianatra ireto. Nanome toky ny filohan'ny oniversite fa hiezaka hikaroka vahaolana momba ny vatsimpianarana ao anatin'ny fotoana fohy, tsy nahafapo ireo solotenan'ny mpianatra anefa izany satria mila ny vatsim-pianarana efa-bolana farany miara-mivoaka izy ireo noho ny taom-pianarana efa nifarana.
jeudi, 05 octobre 2017 10:05
Peste à Toamasina: Le médecin inspecteur contaminé
Le médecin inspecteur de Toamasina, qui est aussi au front pour combattre la maladie, a attrapé la peste, il est placé en soin intensif avec sa famille à l'hôpital kely de Toamasina.